Kooxda Manchester United Ayaa u Dhaqaaqeysa Soo Xiro Gelinta sanches (waa kee) – STAR FM SOMALIA
Kooxda Manchester United Ayaa u Dhaqaaqeysa Soo Xiro Gelinta sanches (waa kee)
Kooxda man united ayaa Lagu soo wara mayaa in ay ku dhowdahay xidiga kooxda Benfica renato sanches, sida ay sheegtay Daily mail Xidigan oo 18 jir ah ayaa lasoo baxay Qaab ciyaareed cajiib ah tan iyo markii uu usoo dalacay kooxdda waa weyn taana ayaa Manchester united ku Qasbeysa in ay lasoo Wareegto xidigaan. renato sanches ayaa ka ciyaara Khadka Dhexe Wuxuuna kooxdiisa kula jiraa heshiis dhacaya 2020. Kooxda Befica ayaa Sheegtay in Heshiiska xidigan lagu bur burin karo 58.8 million
Goolhaye Simon Mignolet Oo Heshiis Waqtigiisa Dheer Yahay Kooxda Liverpool U Saxiixay
DEG DEG, Difaaca Arsinal Nacho Monreal oo Heshiis Cusub OO Waqti Dheer u Saxiixay Kooxdiisa Arsinal
Kooxda kubadda Cagta Elman oo ka mid ah kooxaha ugu waaweyn ee Soomaaliya ayaa maanta ka hartay horyaalka koowaad ee Dalka kadib markii ugu horeysay tan iyo markii uu dib u bilowday horyaalka Soomaaliya Dowladii dhexe ee dalka.
Kooxda Elman ayaa ka mid ahayd kooxaha ugu guulaha badan ee Horyaalka dalkeenna.
Kulankii ugu dambeeyey oo ah mid lagu kala saarayay, Elman iyo Jeenyo cidda u laabaneyso horyaalka heerka labaad ee dalka ayaa ka dhacay galabta tuulada Cayaaraha ee Muqdisho, waxaana cayaartii maanta oo ay u soo daawasho tegeen dadweyne aad u fara badan oo ka kaal yimid Degmooyinka Gobolka Banaadir.
Qeybtii hore ee cayaarta ayaa lagu kala nastay bar bardhac 1-1, waxaana cayaarta qeybtii labaad marka la isku soo laabtay ay labada koox sameeyeen weerar iyo weerar celis oo ay labada dhinacba ku abuureen fursado dahabi ah oo ay goolal ku keeni kareen, balse ugu dambeyn Kooxda Jeenyo ayaa la timid gool taasi oo cayaarta ka dhigtay 2-1 oo ay guusha ku hogaamineysay Jeenyo.
Guud ahaan cayaaarta ayaa ku soo idlaatay 2-1 oo ay guusha ku raacday Kooxda Jeenyo, halka Kooxda Elman ay u laabatay heerka labaad horyaalka Dalka.
Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain ayaa si rasmi ah ugu dhawaaqday saxiixa goolhayaha reer Talyaani ee Gianluigi Donnarumma.
Gianluigi Donnarumma ayaa u saxiixay Kooxda reer France ee Paris Saint-Germain, heshiis muddo 5 sano ah, kaasoo gaaraya ilaa iyo xagaaga 2026, kaddib markii uu kaga soo dhaqaaqay naadiga reer Talyaani ee AC Milan.
Ku dhawaaqistan rasmiga ah ee dhameystirka heshiiska Gianluigi Donnarumma ayaa imaanaya dhowr maalmood kaddib markii uu xulkiisa Talyaaniga ku hoggaamiyay hanashada Koobka Qaramada Qaarada Yurub ee Euro 2020.
Gianluigi Donnarumma ayaa si bilaash ah ugu biiray kooxda reer France eeSaint-Germain, kadib markii uu dhacay qandaraaskiisa naadiga AC Milan.
Goolhayaha reer Talyaani ayaa noqday saxiixii afaraad ee kooxda Paris Saint-Germain xagaagan, kaddib xiddigaha kala ah Georginio Wijnaldum, Achraf Hakimi iyo Sergio Ramos.
kooxda kubadda cagta Real Madrid ayaa xaqiijisay in Kabtankeeda Sergio Ramos uu isaga tagayo naadiga marka uu dhammaado qandaraaskiisa.
Laacibkan ayaa haatan soo gabo-gabeynaya 16 sano oo uu xirnaa maaliyadda naadiga Real Madrid xagaagan.
Muddooyinkii ugu dambeeyay waxaa socday wada-xaajood ku aaddan in heshiiska loo kordhiyo difaaca reer Ispain balse ugu dambeyn waxaa burburay wada-hadalladaas
saacadaha soo Aadan ayaa la qorsheeyay inuu xiddiggan qabto shir jaraa’id oo uu ku macsalaameynayo kooxda.